काठमाडौं, २२ वैशाख । जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल उम्मेदवार बन्दैछन् । उनी एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर मैदानमा उत्रनेछन् । उनको विरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनबाट नेकपा एमालेकै अर्का नेता डा. खिमलाल देवकोटा मैदानमा उत्रने भएका छन् । उनको चुनाव चिन्ह हुनेछ गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बादललाई अघि सारेका हुन् । उता, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई समूहले एमालेको माधव नेपाल समूहका देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरेका हुन् । देवकोटालाई एमालेभित्रको खनाल-नेपाल समूहका मतदाताले पनि मतदान गर्नेछन् ।
मंगलबार साँझ विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु मिलेर उनलाई साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले माओवादी र एमालेलाई अलग गराएसँगै बादलले माओवादी छोडेको घोषणा गरेका थिए। पार्टी परित्यागपछि माओवादी केन्द्रले उनको सांसद पद खोसेको हो ।
डा. खिमलाल देवकोटाclose